Gianluigi Buffon tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainana tsy fantatra
Home STARS EUROPEAN Gianluigi Buffon tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny fanakanana ny baolina kitra malaza amin'ny "Nicknames"; "Gigi, Superman". Ny tantarantsika ny tantaram-pianakavian'i Gianluigi Buffon momba ny tantely sy ny tantaram-pitiavana dia mitondra fitantarana feno momba ireo hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny ankamaroan'ny zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, samy mahafantatra ny fahaiza-manaony avokoa ny tsirairay fa ny sasany kosa dia mihevitra ny Buffon Biography LB izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Gianluigi Buffon tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Voalohandohan'ny fiainana
Gianluigi "Gigi" Buffon dia teraka tamin'ny andro 28 tamin'ny 1978 tamin'ny volana Janoary, tany Carrara, Italia nalain'i Maria Stella Buffon (reny) sy Adriano Buffon (ray).
Ny fantsom-panafahana Italiana dia teraka tao amin'ny atleta Italiana mpanankarena. Renim-pianakaviana, Maria Stella, dia mpitaingin-tsoavaly iray ary ny rainy, Adriano, Italiana malaza.
Amin'ny maha-zaza ao an-trano azy, dia tia fifandraisana mahafinaritra amin'ny ray aman-dreniny i Gigi, indrindra fa ny mamanany izay nanana fomba mahazatra ho an'ny zanany farany. Ity ambany ity ny sarin'i Buffon tamin'ny fahazazany nandritra ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany.
Andriamatoa Gianluigi Buffon sy ny reny (Tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany)
Buffon dia nampiseho ny fototarazony tsara indrindra tamin'ny zaza, noho ny ray aman-dreniny atletika.
Na dia teo aza ny fisafotofotoana teo amin'ny fifantohana ara-panatanjahantena, dia nandeha tamin'ny baolina izy. Nandritra ny enin-taona monja dia nampidirin'ny ray aman-drenin'i Buffon azy tao amin'ny Canaletto di La Spezia ny lalao baolina kitra any Espana izay nananany nanomboka ny asany ho mpilalao midiademy.
Buffon Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Career Summary
Hambara ny fahamarinana. Gigi dia nanomboka tamin'ny maha-mpilalao baolina azy ary tsy nitifitra mihitsy. Toy izany ihany koa David De Gea. Beow dia sarin'ny tanora Buffon fony izy mpilalao baolina kitra.
Young Buffon ho mpilalao midika
Nanao ny lalao voalohany tao San Siro izy tamin'ny 10 taona nandritra ny fifaninanana ho an'ireo mpilalao tanora tsara indrindra avy any Veneto. Roa taona taty aoriana, nahita ny sampy i Cameroun, mpilalao Kamerone Thomas N'Kono, izay nilalao tao amin'ny World Cup 1990.
Ny tantaran'ny Idol-Thomas N'Kono
Thomas dia tompon'andraikitra tamin'ny toerana fanovan'ny Buffon avy amin'ny mpilalao baolina amin'ny mpiambina iray. Ny italianina manontolo dia tokony hanamafy azy hatramin'izao.
Buffon no nanao ny laharam-baiboliny nandritry ny roa tonta nandritry ny roa tonta. Taorian'ny tapa-bolana monja tamin'ireo mpankafy azy, dia nanjary mpitarika maharitra izy ary nafindra toerana tsy iray monja, fa mpiandry tsatokazo roa tao amin'ny ekipany. Izy dia taona 16 tamin'io fotoana io.
Ny fahombiazan'ny tanora mpiambina italiana tany Parma dia tonga tamin'ny fotoana fahaefatra tamin'ny klioba, raha nanampy tamin'ny fandresena ny Coppa Italia sy ny UEFA Cup izy. Ity vanim-potoana ity dia tonga tamin'ny fotoana nanaovan'ny ekipa Parma ny fitiavan'i Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo, Lillian Thuram, ary Fabio Cannavaro. Taorian'ny fizaran-taona roa mahatalanjona teo amin'ny mavo sy manga, dia nafindra tao Juventus i Buffon noho ny tantara mahavariana 50 tapitrisa euro (rakitsoratra ho an'ny mpitandrina iray tamin'izany).
Gianluigi Buffon tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Noraisina tsara nandritra ny taona ny atleta italiana. Ny fananana mamanay sy ray izay mankalaza ny atletisma dia midika ara-bakiteny hoe avy amin'ny fianakaviana matanjaka. Izany no an'i Gianluigi Buffon. Eto izahay dia manome hevitra anao momba ny ray aman-drenin'i Gigi.
RAY: Ny rain'i Buffon, Adriano Buffon dia mpanefy. Teraka tamin'ny 15T Sep 1945 tany Latisana, Italia avy amin'i Masocco Giorgio (ray) ary Paolini Teresa (reny). Ity ambany ity ny sarin'ny tanora Adriano.
Ny rain'i Gianluigi Buffon - Adriano Buffon
Taorian'ny fisotroan-drononony atletika, dia niasa ho mpampianatra sekoly PE i Adriano.
rENY: Ny renin'i Gigi, Maria Stella Buffon dia mpandresy mpanatontosa ary nisolo tena an'i Italia teo amin'ny sehatra nasionaly. Niara-niasa tamin'ny vadiny izy mba ho mpampianatra sekolin'ny PE aorian'ny fisotroan-dronono.
Ny renin'i Gianluigi Buffon - Stella Maria Buffon
Ity manaraka ity ny sarin'ny ray aman-dreny ara-panatanjahan'i Gigi, Mr. and Mrs. Adriano Buffon.
Ny androany dia mijery ny ray aman-drenin'i Gianluigi Buffon
SISTERS ELDER: Gigi no hany zanany lahy. Guendalina Buffon no rahavavy lehibe indrindra amin'i Gigi. Teraka tao amin'ny 1973 izy. Ity ambany ity ny sariny sy ny zandriny lahy ary ny miaramila Gigi 'Italiana.
Guendalina Buffon sy ny rahalahiny 'Gigi'
Ity ambany ity ny sarin'i Buffon Sister, Veronica Buffon. Teraka tao amin'ny 1975 izy. Veronica Buffon dia nilalao volleyball ho an'ny ekipa volleyball italiana.
Ny anabavy zokin'i Gigi taloha - Veronica Buffon
Dadatoa: Gigi Buffon dia manana dadatoany antsoina hoe Dante Masocco. Mpilalao basketball tao amin'ny Series A1 izy, izay nisolo tena ny ekipam-pirenena italiana ihany koa.
Ny dadatoan'i Gigi Buffon, Dante Masocco
mpiray tam-po: Ny talohan'ny nahafatesan'i Gianluigi Buffon an'i Milan no nanambady an'i Milan sy Milan.
Ny havan'i Gigi's Buffon -Lorenzo Buffon
Gianluigi Buffon tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Relationship Life
Gigi dia manan-karena ary tsara tarehy. Ny dikany dia midika fa tsy misy fifandraisana amin'ny fifandraisana eo amin'ny fiainany. Manolotra anao izahay, antsipiriany momba ny fiainam-pifandraisana.
Ny tantaram-pitiavana nataon'i Gigi Buffon dia niantomboka tamin'ny 2005 rehefa nihaona izy ary nanjary tia an'i Alena Seredova. Alena no mpandresy voalohany an'ny Repoblika Tseky tao 1998 ary solontenan'ny fireneny ao amin'ny Miss World 1998.
Gigi Buffon sy Alena Seredova
Gigi dia nanambady an'i Alena Seredova tamin'ny Jona 16, 2011, any Prague. Manana zanaka roa izy ireo, Louis Thomas (teraka 2007) sy David Lee (teraka 2009).
Gigi sy ny zanany, Thomas (ankavanana) ary Davida (havia)
Ny zanaka voalohany antsoina hoe 'Thomas' dia nantsoina taorian'ny sampy Gigi Buffon Thomas N'Kono. Manokana fotoana hiresahana amin'ny zanany roa izy. Izany dia mitranga tokoa raha mbola eo am-baravarana izy.
Tamin'ny May 2014, Buffon dia nanambara fa hisara-panambadiana amin'ny vadiny. izy ireo nisaraka telo taona taorian'ny fanambadiana.
Tsy ela izy dia nifandray am-pihetseham-po tamin'ny fanatanjahan-tena italiana Italiana, mpanao gazety sady mpilalao televiziona Ilaria D'Amico.
Araka ny gazetiboky iray any Italie dia Buffon sy D'Amico "Tahaka ny bitro" Ary nanomboka nitaraina ireo mpifanolo-bodirindrina momba ny feon'ny fitiavana nataony.
Tao amin'ny 2015, nanambara i Buffon fa nanantena ny mpivady iray hiaraka izy ireo. Tamin'ny 6 January 2016, nanambara ny nahaterahan'i Leopoldo Mattia zanany lahy ireo mpivady tao amin'ny Twitter tany am-piandohan'io hariva io.
Tamin'ny fahavaratry ny 2017, nirotsaka ny mpivady. Talohan'ny fifandraisany sy ny fanambadiany tamin'i Šeredová, Buffon koa dia efa nifamotoana tamin'ny mpitaingina avy ao amin'ny ekipa ekipa mpilalao Atlantika Italiana, Vincenza Calì.
Gianluigi Buffon tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -2003 / 2004 Sezon
Tao amin'ny 2013, Buffon dia nanambara fa niaritra ny fahaketrahana nandritra ny vanin-taona 2003-04 izy, taorian'ny sazy nahazoan'i Juventus tamin'ny faharesena tao amin'ny 2003 Champions League farany, ary noho ny fahombiazan'i Juventus tamin'ny vanim-potoana ratsy.
Nitsidika mpitsabo aretin-tsaina foana i Buffon saingy nandà tsy handray fanafody izy ary nandresy ny fahakelezany talohan'ny Euro 2004
Gianluigi Buffon tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Wine Business
tahaka Andrea Pirlo ary Andres Iniesta, Buffon koa dia manome savony ny divainy samihafa araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany.
Avy amin'i Gigi Buffon ho Wesley Sneijder, ho an'i Ivan Zamorano: mihamaro hatrany ny tompon-daka amin'ny baolina kitra amin'izao fotoana izao no nahita ny anarany voaravaka tavoahangy divay ho toy ny labels.
Vao haingana tao amin'ny 2017, Buffon dia nanokatra ny divainy tamin'ny divay, mitondra ny anarana hoe "Buffon #1".
Gianluigi Buffon tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Namana ho an'ny Papa
Buffon dia Katolika amin'ny finoana. Izy dia namana naman'i Papa François. Samy nivory tao amin'ny 2013 ny mpivady roa teo ambany elo'ireo baolina kitra sy fivavahana.
Gianluigi Buffon tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Fomban-dalao sy fandraisana
Hatramin'ny nipoahany ho toy ny talenta vao haingana teo amin'ny fahazazany, Buffon dia nalaza noho ireo fampisehoana tsy tapaka nataony nandritra ny asany. Ny lazany dia nahazo fiderana avy amin'ny mpitantana, ny mpilalao, ary koa ny mpiara-miasa mpiara-miasa aminy teo aloha sy teo aloha. Izany dia noho ny fifantohany sy ny herim-po nasehony teo ambany fanerena, ary koa ny asany, ary ny faharetany.
Matetika izy no noheverina ho toy ny aretin-koditry ny mpiandry tsatokazo ankehitriny ary nasehon'ireo tanjona hafa taty aoriana fa fitaovana lehibe sy modely lehibe.
Gianluigi Buffon tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Shirt number
Raha ao Parma, ny fanapahan-kevitr'i Buffon hitafy ny lobaka 88 isa, fa tsy ny sombim-bokiny 1 taloha, ho an'ny 2000-01 fizaran-taona niteraka resabe tany Italia.
Buffon, na izany aza, dia nilaza fa tsy mahatsikaritra ny filazan'ny neo-Nazi ny isa, tamin'ny filazana fa ny 88 dia maneho "baolina efatra", izay marika amin'ny toetra sy ny toetran'ny olona iray. Nolazainy fa izy ireo dia natao hanondroana ny filàna ireo toetra ireo taorian'ny korontana talohan'ny Euro 2000 ary nampiseho ny "fahaterahany indray" koa izy ireo.
Nanolo-kevitra ny hanova tarehimarika izy avy eo, mifidy ny laharam-pahefana 77.
Gianluigi Buffon tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Fandresena sazy an-tranomaizina
Tao amin'ny 2000, Buffon dia nanao sazy an-tranomaizina nandritra ny efa-taona noho ny famoahana ny mari-pahaizana momba ny fitantanana sekoly ambaratonga faharoa mba hisoratra anarana ho an'ny mari-pahaizana ambony ao amin'ny Oniversiten'i Parma.
Nandoa onitra 3,500 euro tamin'ny 2001 izy. Nolazainy tatỳ aoriana fa io no tena nanenina azy.
Gianluigi Buffon tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Tsy fanajana an-tsokosoko
Amin'ny 12 May 2006, mandritra ny haavon'ny Calciopoli tantara ratsy, I Buffon dia voampanga ho tsy mitongilana amin'ny baolina fandaka Serial A, izay napetraka tamin'ny toerana voalohany tao amin'ny ekipan'ny World Cup 2006 Italia.
Nohadihadiana am-bava i Buffon ary niaiky ny hametrahana tsaratsara amin'ny lalao fifaninanana. Satria noho ny tsy nahazoan'ny mpilalao baolina kitra tamin'ny banky nanomboka tamin'ny Oktobra 2005. Buffon dia navela ny fiampangana rehetra tamin'ny Desambra 2006.
Gianluigi Buffon tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Football Politics
Tamin'ny 7 May 2012, Buffon dia voafidy ho filoha lefitry ny Fikambanan'ny Football Football (AIC). Ity no fotoana voalohany nahitana mpilalao baolina mavitrika iray nihazona io toerana io.
Tamin'io taona io, Buffon dia nanatevin-daharana ny "Hajao ny fahasamihafana" Fandaharan'asa, amin'ny alalan'ny UEFA, izay mikendry ny hiady amin'ny fanavakavahana, fanavakavahana sy tsy fandeferana amin'ny baolina kitra.
Gianluigi Buffon tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -His Progidy
Gianluigi Buffon dia naminavina ny hoavy mamirapiratra mialoha ho an'ny mpiray tanindrazana Gianluigi Donnarumma izay mitondra anarana mitovy aminy. 'Afaka ny ho zanako lahy aho' goalkeeper Toronto Donnarumma ' - hoy i Gianluigi Buffon.
Nanjary fikarohana malaza amin'ny aterineto ny fifandraisana amin'i Buffon raha manana ny baiko AC Milan.
Araka ny voalazan'ny AC Milan goalkeeper ... "Manana fifandraisana tsara amin'i Gigi aho. Manome toro-hevitra ahy foana izy ary mitaiza ahy tahaka ny rahalahiny, na dia mitovy aza ny anaranareo ary tsy mifandray. manana aho nanandrana mba hijery ny fihetsika rehetra ataony amin'ny fampiofanana ary misaotra azy noho ny maha-maherifo ahy. Milaza ny rehetra fa mpandova an'i Gigi aho, ny zanany lahy na ny rahalahiny. Amin'izao fotoana izao dia mifantoka afa-tsy amin'i Milan aho ary manao tsara any, tahaka ny an'ny ekipa Nanohana ahy hatramin'ny fahazazako. Efa any amin'ny klioba ambony aho. "
Italiana Football Diary
Jolay 19, 2018
Sami Khedira Tantaram-pahaizana momba ny tantaram-pitiavam-bahaka bebe kokoa tsy fantatra